Sida loo qaabeeyo Baaburkaaga wax iibsanaya Ololeyaal emayl | Martech Zone
Sida loo qaabeeyo Baaburkaaga wax iibsiga Kaambeynka Ololayaasha
Friday, May 6, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Shaki kuma jiro dejinta iyo fulinta wax ku ool ah Gawaarida wax iibsiga ee ololaha emaylka shaqeeya Xaqiiqdii, in ka badan 10% emayllada ka tagista gawaarida ayaa la furay, waa la riixay. Iyo qiimaha celceliska dalabka ee iibsiyada iimaylada ka tagista gaadhigu waa 15% ka sarreeya iibsiyada caadiga ah. Ma qiyaasi kartid ujeeddo ka badan booqdaha bartaada oo shey ku kordhinaya gaadhigaaga wax iibsiga!
Sida suuqleyda, ma jiraan wax qalbi xanuun ka badan marka ugu horeysa ee aad ku aragto soogalooti badan websaydhkaaga ecommerce - waqti qaali ah, ku darista wax gaadhigooda ka dibna ka tagaya ka hor intaadan marin nidaamka iibka. Marka, maxay taasi macnaheedu tahay? Miyay ka gooyaan astaantaada weligood? Malaha maya! Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso ayaa ah inaad sameyso dadaal dheeri ah si aad dib ugu soo jiido oo aad ogeysiiso inay muhiim yihiin.
Faahfaahintan oo laga soo xigtay Email Monks waxay faahfaahin ka bixinayaan dabeecadaha iibsadayaasha e-commerce, cilmu-nafsiga ka dambeeya ka-tagista gawaarida dukaamaysiga iyo ololeyaasha dib-u-soo-celinta, iyo sidoo kale waxay sharraxayaan tallaabooyinka 7 ee loogu talagalay naqshadeynta ololeha iimaylka ka-tagista wax-ku-oolka ah
Waqtiga iyo Mawjadaha Muhiimka ah - 60 daqiiqo gudahood markaad ka tagto, waa inaad dirtaa emaylkaagii ugu horreeyay. Email labaad waa in lagu soo diraa 24 saacadood gudahood. Iyo emayl saddexaad waa in lagu diraa saddex illaa 5 maalmood gudahood. U dirista illaa sedex emayl oo ka tagid ah waxay keeneysaa celcelis $ 8.21 dib ugu soo laabashada maalgashiga.
Tixgeli Maraakiibta Bilaashka ah - Ku tijaabi dukaamadaada aad ka tagtay dalab, ama qiimo dhimis ama xamuul bilaash ah. Cilmi baaris ayaa muujisay in maraakiibta bilaashka ah ay laba jibbaar noqon karaan boqolkiiba boqolkiiba.
Ku tijaabi iyaga dalab aan la diidi karin - Daraasaduhu waxay muujiyeen in emaylka dayaca oo ka kooban qiimo dhimis 5% -10% ah iibsiga ugu horreeya uu kaa caawin karo heerkaaga ka tegistaada.
Muuji Sawirada Alaabta - Qalabka raadraaca indhaha ayaa muujinaya in ay ku jiraan sawirka badeecada la iska daayay halkii laga heli lahaa kaliya isku xirnaanta sheyga ee emailka ka tagida gaadhiga ayaa soo jiidanaysa fiiro gaar ah oo taa ka baxsan.
Iib-ka-iibintu Ma Xun - Iskutallaabinta ka iibinta alaabada kuwa ka tagaya ayaa waliba isu rogi kara duco ugu dambaysa ganacsigaaga. Muuji beddelaadaha ku habboon iyo kuwa wax iibiya.
Habee Iimaylka Ka Tagaya - Ka faa'iideyso soo-booqdaha taariikhda booqashada iyo iibsigii hore si aad ugu habboonaato dalab shaqsiyeed.
Xalliyaan Su'aalaha - E-mayllada ka-tagga gawaarida ayaa gacan ka geysan kara xallinta weydiimaha kuwa ka tagay - iyaga oo siiya macluumaad ku filan kana caawiya iyaga inay go'aan ka gaaraan iibsashada. Sii iibsadahaaga xulashooyin kugu filan si aad uga caawiso inay kula soo xiriiraan oo ay u xalliyaan weydiimahooda.
Lamaanahaaga dukaameysiga ka-tagga ololeyaasha emaylka ee leh dib-u-beegsiga xayeysiinta iyo istiraatiijiyado fara badan si loo kordhiyo waxtarkooda ku guuleysiga iibsadaha.
Tags: baxsiKa tagida gaadhigaemayllada ka tagida gawaaridadalabyada dhimistaemaylka e-commerceka tagida gawaarida emaylkaemaylka ctadalabyada dhimista emaylkaemail suufiyadoodiimaraakiibta freemulti-channeldib-u-bartilmaameedsiga
Maxay yihiin Abaal-marinta ugu Caansan ee Bixintaada Bixinta?